Ibhethri elide lokuhlolwa nezikolo ngaphansi kokujwayelekile (kubantu abajwayelekile) - Ukuqeqeshwa Okuqondayo
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » Ibhethri elide lokuhlolwa nezikolo eziphansi (kubantu abavamile)
Iningi labachwepheshe ababhekana nokuhlola kokuqonda bayazi ukuthi odokotela manje banamathuluzi ahlukahlukene (izivivinyo) ahlukahlukene atholakalayo ukuzama ukukala amakhono amaningi anjengememori, ukunakwa, ulimi, imisebenzi ephezulu kanye l ubuhlakani (ukubiza amagama ambalwa nje). Ngaphezu kwalokho, uma kunikezwe ubunzima bento efundwayo (ukuqonda kuyaqabukela ukuthi kuhlolwe kahle i-neuropsychological ngokusebenzisa izivivinyo ezimbalwa.
Kodwa-ke, ukuphatha izivivinyo eziningi ezigulini ezifanayo, uma ngakolunye uhlangothi kusivumela ukuba sibe nedatha eminingi futhi sijulise ulwazi lwethu lwesithombe sasemtholampilo, ngakolunye uhlangothi kuthwala ubungozi obukhulu, ovame ukungabukeli phansi, esizoxoxa ngabo manje.
Labo abajwayele ukufunda izincwadi zesayensi kule ndawo bazobe sebebonile ukuthi lapho abacwaningi bezithola besebenzisa ukuqhathanisa kwezibalo eziningi, basebenzisa (noma kufanele basebenzise) ukusetshenziswa kwezici zokulungisa ukunciphisa ubungozi Thayipha amaphutha we-I (ukuthola incazelo ngephutha lohlobo I, bheka nelethu glossary). Ngaphandle kwalezi zinto zokulungiswa, empeleni, umcwaningi angazifaka engcupheni yokubona umbono wakhe "uqinisekisile" kuphela ngenxa yezici ezingahleliwe eziguqula amaphuzu.
Ake sithathe isibonelo ukuze siqonde kangcono. Uma sigingqa i-classic 6-sided die, enezinombolo ukusuka ku-1 kuye ku-6, kanye nokubheja ekuphumeni kwe-3, amathuba okuqagela yi-1 kwezingu-6. Nokho, kunengqondo ukuthi uma sisonga idayisi amahlandla ayi-10 bese sibheja i-priori ephumayo kwezingu-3, ​​amathuba wokuqagela phezu kwawo wonke ama-cast ayi-10 angaphakama kakhulu kune-1/6. Amathuba okubona ukuphuma kwawo okungenani kanye ku-3 ngakho-ke kufanele alungiswe ngesisekelo senombolo yokujikijela okwenziwayo.
Ngeqiniso, isihloko esifuna ukusidingida maqondana nokusetshenziswa kwamabhethri wokuhlola obanzi asetshenziswa kulungiselelo lomtholampilo asihlukile kakhulu. Ingozi yezimangaliso zamanga inyuka ngokuphathwa kokuhlolwa okuningi nokulungiswa kokuqhathanisa okuningi akuvamisile ukusetshenziswa.
Njengoba kusho uBrooks nozakwabo, enye indlela lapho odokotela ngezinye izikhathi bezama ukugcina ubungozi bezimpawu ezingamanga zilawulwa ukuhunyushwa kwemiphumela futhi maqondana nokwanda kokuthi ukusebenza okuncane kuqhamuka emphakathini onempilo.
Noma kunjalo, le datha ayitholakali njalo.
Njalo ama-Brooks nabahlanganyeli ifune ukulinganisa ukuthi kungenzeka ukuthi izikolo ezingaphansi kwesilinganiso zingavela kanjani ngokuphathisa ibhethri lokuhlolwa kwe-neuropsychological ekukhuleni izingane nezingane ezisakhula. Ibhethri okukhulunywa ngalo yi-NEPSY-II.
Kalula nje, abacwaningi bazamile ukuphendula lo mbuzo: kufanele sicabangele nini ngaphansi kwezilinganiso ezimaphakathi zesilinganiso ku-NEPSY-II?
Akuwona umbuzo wenzalo emncane yomtholampilo ngoba i-NEPSY-II, yize isasetshenziswa kancane (ngenxa yezindleko ezingejwayelekile e-Italy), isakazeka kakhulu. Kulabo abangayazi, yibhethri ebanzi yokuhlolwa kwe-neuropsychological yobudala bokukhula (kusuka eminyakeni emi-3 kuya kwengama-16) ehlanganisa izizinda eziningi zokuqonda: Attenzione e imisebenzi ephezulu, ulimi, inkumbulo e yokufunda, imisebenzi yezinzwa, umbono wezenhlalo ed ukucubungula kwendawo.
I-NEPSY-II yanikezwa isampula yabantu abayi-1200 kusukela kwabathathu kuya kwabangu-3 ubudala. Kodwa-ke, akuzona zonke izivivinyo ezikhona kwikhithi ezenziwa (futhi ngoba, njengoba ababhali besho, cishe akekho umuntu osemtholampilo obheka ukusetshenziswa kwalo lonke ibhethri elisebenza esigulini esisodwa) kodwa kuyingxenye yalo kuphela; noma kunjalo, kuyingxenye enkulu, enesikhathi sehora elilodwa noma amahora amabili.
Nazi izivivinyo ezisetshenziswa yiqembu lobudala:
Iminyaka emi-3 - 4 yobudala.
ulimi. Ukuqonda Imiyalo, Ukucutshungulwa Kwesimanjemanje, Ukuqina Okusheshayo (isikhathi).
Imemori nokufunda. Imemori esheshayo (isiyonke), Imemori Elandisayo (isiyonke).
Ukusebenza kwe-Visuo-spatial. Ukwakha ngamaBhlokhi, amaJiyomethri weJiyomethri.
Iminyaka emi-5 - 6 yobudala.
Ukuphathwa kwehora elilodwa.
Ukunaka kanye nemisebenzi ephezulu. Inhibition "Denomination" (isikhathi), Inhibition "Inhibition" (isikhathi).
ulimi. Ukuqonda Imiyalo.
Imemori nokufunda. I-Instant Design Memory (isiyonke), Imemori Yokwakhiwa Emisiwe (ingqikithi), Imemori Elandisayo (isiyonke), Imemori Elandisayo (ukwenziwa kabusha okuzenzakalelayo).
Ukusebenza kwe-Visuo-spatial. Ukwakha ngamaBhlokhi.
Ukuphathwa kwamahora amabili.
Ukunaka kanye nemisebenzi ephezulu. Ukunakwa kwe-Auditory (inani), Inhibition "Denomination" (isikhathi), Inhibition "Inhibition" (isikhathi).
Iminyaka emi-7 - 16 yobudala.
Ukunaka kanye nemisebenzi ephezulu. Inhibition "Denomination" (isikhathi), Inhibition "Inhibition" (isikhathi), Inhibition "switching" (isikhathi).
Imemori nokufunda. Imemori Yokwakheka Ngayo (isiyonke), Imemori Yokwakhiwa Okumele ukwenziwa (isiyonke), Inkumbulo Yezinganekwane (isiyonke), Inkumbulo Yezinganekwane (ukwenziwa kabusha okuzenzakalelayo), Imemori Yokungenelela (ukuphindaphinda), Imemori Yokuphazamisa (ukuphinda usebenzise).
Ukunaka kanye nemisebenzi ephezulu. Ukuqoqwa Kwezilwane, Ukunakwa Kwamabhuku Okuhlola (okuphelele), Ukuphendula Ngokuphelele (okuphelele), Inhibition "I-Denomination" (isikhathi), Inhibition "Inhibition" (isikhathi).
Njengoba kubantu abavamile inani lokuhlolwa okungenasici lingahluka futhi ngokwezinga lemfundo, abacwaningi banqume ukukuqagela ngokwezinga labazali lemfundo. Umcabango kwakuwukuthi, okucatshangelwa ukuthi, izinga eliphakeme lemfundo lihlotshaniswa nezinga eliphakeme lemfundo nokuthi, ngaphezu kwalokho, izinga lobuhlakani bezingane livame ukuhlotshaniswa nelabazali (ngokusobala lokhu kulinganisela okungenamsoco okubanzi umugqa wephutha, hhayi wobudlelwano obunqumayo).
Ababhali bocwaningo babaliwe, ngalinye lamaqembu abonisa iminyaka yobudala, ukwanda kwezikolo ezingejwayelekile. Ake sibabone ngamunye ngamunye:
Ngokuphatha i Izivivinyo eziyi-7 esivele sisohlwini, u-71,5% wezingane uthole amaphuzu owodwa noma amaningi ngaphansi kwe-25th percentile; I-40,5% yazo yayinezikolo ezi-10 noma ngaphezulu ngaphansi kwe-24,7th percentile; I-5% yayo yayingaphansi kwe-8,9th percentile ekuhlolweni okukodwa noma ngaphezulu; Ekugcineni, yi-2% kuphela yalezi zingane enezikolo ezingekho ngaphansi kwezingu-XNUMX.
Izikolo ezinhlanu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile, izikolo ezintathu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile, izikolo ezimbili noma ngaphezulu ngaphansi kwe-5th percentile, kanye nezikolo ezingekho ngaphansi kwe-2nd percentile zazingaphandle kokujwayelekile.
Elinye iqiniso elithokozisayo ukuthi ukwanda kwezinga eliphansi ngokwesilinganiso lalincipha ngokukhula kwesikole sabazali (kungenzeka ukubuka amatafula ngokuningiliziwe ngokubonisana ngokukhululekile ocwaningweni lwasekuqaleni oluxhumano lwalo lukhona ebhayibhelini).
Mayelana nobufakazi bokuphathwa kwehora elilodwa (Ukuhlolwa kwe-8), U-70,3% wezingane uthole amaphuzu owodwa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile; I-37,2% yazo yayinezikolo ezi-10 noma ngaphezulu ngaphansi kwe-20,7th percentile; I-5% yayo yayingaphansi kwe-4,8th percentile ekuhlolweni okukodwa noma ngaphezulu; ekugcineni, yi-2% kuphela yalezi zingane enenqwaba eyodwa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-XNUMXnd percentile.
Izikolo eziyisithupha noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile, amaphuzu amathathu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile, izikolo ezimbili noma ngaphezulu ngaphansi kwe-5th percentile, kanye nenqaku elilodwa noma amaningi ngaphansi kwe-2nd percentile.
Kuqhathaniswa nokuphathwa kwamahora amabili esikhundleni (Ukuhlolwa kwe-12), I-82,6% yezingane ithole inani elilodwa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile; I-49,3% yazo yayinezikolo ezi-10 noma ngaphezulu ngaphansi kwe-29,7th percentile; I-5% yayo yayingaphansi kwe-10,1th percentile ekuhlolweni okukodwa noma ngaphezulu; Ekugcineni, yi-2% kuphela yalezi zingane eyayinezikolo ezi-XNUMX noma ngaphezulu ngaphansi kwe-XNUMXnd percentile.
Izikolo eziyisikhombisa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile, izikolo ezintathu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile, amaphuzu amabili noma ngaphezulu ngaphansi kwe-5th percentile, kanye nenqaku elilodwa noma amaningi ngaphansi kwe-2nd percentile.
Futhi kuleli cala ukwanda kwamanani wezinga eliphansi bekuncipha ngokuqhubeka kwesikole sabazali (kungenzeka ukubuka amatafula ngokuningiliziwe ngokubonisana ngesihle ucwaningo lwangempela lokuthi isixhumanisi esisebhayibhelini likhona).
7-16 yeminyaka yobudala.
Mayelana nobufakazi bokuphathwa kwehora elilodwa (Ukuhlolwa kwe-11), I-84,7% yezingane nabantu abasha bathole amaphuzu owodwa noma amaningi ngaphansi kwe-25th percentile; Ama-52,4% wabo ayenezinga elilodwa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile; I-34,8% yayo yayingaphansi kwe-5th percentile ekuhlolweni okukodwa noma ngaphezulu; Ekugcineni, yi-10,3% kuphela yalezi zingane eyayinezikolo ezi-2 noma ngaphezulu ngaphansi kwe-XNUMXnd percentile.
Izikolo eziyisikhombisa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile, izikolo ezine noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile, amaphuzu amathathu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-5th percentile, kanye nelinye noma ngaphezulu kwezikolo ezingezansi kwe-2nd percentile zazingaphandle kokujwayelekile.
Kuqhathaniswa nokuphathwa kwamahora amabili esikhundleni (Ukuhlolwa kwe-17), I-92,1% yezingane nabantu abasha bathole amaphuzu owodwa noma amaningi ngaphansi kwe-25th percentile; Ama-62,9% wabo ayenenqwaba eyodwa noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile; I-44,1% yayo yayingaphansi kwe-5th percentile ekuhlolweni okukodwa noma ngaphezulu; Ekugcineni, yi-14,7% kuphela yalezi zingane enezikolo ezingekho ngaphansi kwe-2nd.
Izikolo eziyishumi noma ngaphezulu ngaphansi kwe-25th percentile, izikolo ezinhlanu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-10th percentile, amaphuzu amathathu noma ngaphezulu ngaphansi kwe-5th percentile, kanye nezikolo ezimbili noma ngaphezulu ngaphansi kwe-2nd percentile zazingaphandle kokujwayelekile.
Ngokusobala, ngisho nakuleli qembu leminyaka ukwanda kwezinga eliphansi ngokwesilinganiso lalincipha njengoba imfundo yabazali ikhula (kungenzeka ukubuka amatafula ngokuningiliziwe ngokuhlola ucwaningo lwangempela ukuthi isixhumanisi kubhayibheli likhona).
Mhlawumbe bambalwa ochwepheshe abangathuka uma kuhlolwa eyodwa ngaphansi kwesilinganiso kuvamile kwibhethri lokuhlola, ikakhulukazi uma lihlala isikhathi eside. Kodwa ingabe kuvumelekile ngokulingana ukungathuki lapho ubhekene nezikolo eziphansi kuka-2, 3 noma u-4? Yimuphi umkhawulo ngaphezu kwalapho kufanelekile ukubheka izikolo ezithile njengokungathandeki?
Kunembile ukusisiza ukuthi siphendule imibuzo ethile ukuthi ucwaningo olubalulekile olunjengalesi esikutshele ngalo lubalulekile. Ngakho-ke sikumema ukuthi uyilande futhi futhi uyifunde ngokuningiliziwe (amatafula angasebenziseka ikakhulukazi) ngoba itholakala ngokukhululeka, okungajwayelekile.
Kodwa-ke, lolu cwaningo lunemikhawulo ebalulekile okufanele icatshangelwe, ikakhulukazi uma sihlose ukulahla le mininingwane ekusebenzeni kwethu kwemitholampilo. Sibala ezinye zazo:
Ukuvezwa kwezikolo ezingezansi ezishiwo lapha (futhi kufakwe kuhlu olunemininingwane ocwaningweni lwasekuqaleni) kumelele kuphela uma kufakwa ukuhlolwa okufanayo (futhi kuphela lezo).
Ekwenzeni umtholampilo cishe njalo kuyadingeka ukusebenzisa ezinye izivivinyo, hhayi lezo zebhethri elilodwa. Cabanga, ngokwesibonelo, ngengxaki ethile yokufunda esolwayo: kulokhu, ngokusobala, awunakukwazi ukukukhawulela ku-NEPSY-II kepha kuzofanela ukuthi uhlanganise ukuhlolwa kokuqonda (futhi sivame ukutusa ukuhlolwa okubanzi okufana ne-WISC-IV ) nezivivinyo eziningi ezihlobene nokufunda kwesikole (ukufunda, ukubhala nokubala).
Ngakho-ke asinayo idatha yokwanda kwamanani aphakathi kwesilinganiso ku-NEPSY-II lapho kukhona ezinye izivivinyo noma amanye amabhethri wokuhlola. Kodwa-ke, kunengqondo ukulindela ukuthi lokhu kuvelela kuzokwanda kuleli cala.
Kuyabonakala ngaphambili, njengoba kwaqhamuka nezinga lemfundo yabazali, ukuthi ukwanda kwezikolo eziphansi kuzokwehluka ngokuya ngezinga lokuqonda kwengane. Lokhu noma kunjalo akubhekwanga ocwaningweni.
Ngaphandle kwalokhu kukhawulelwa, ucwaningo olusanda kuxoxwa lubeka ukudla okubalulekile kokucabanga (nokuqapha okulandelayo) kumtholampilo obhekana nokuhlolwa kokuxilongwa. Kungenzeka impela ukwenza lezi ziphetho zokugcina kube ezethu:
Izikolo eziphansi kumabhethri we-neuropsychological zivame kakhulu kubantu abanempilo
Inani lezikolo eziphansi kakhulu lincike ekunqumeni okusetshenzisiwe
Inani lezikolo eziphansi futhi lincike kwinani lokuhlola olunikezayo
Inani lezikolo ezingajwayelekile libuye lihluka ngokuya ngeleveli yezazi
IBrooks, BL, Sherman, EM, ne-Iverson, GL (2010). Izingane ezinempilo nazo zithola amaphuzu aphansi futhi: ukwanda kwamaphuzu aphansi ku-NEPSY-II kwabasenkulisa, izingane, nentsha. Izingobo zomlando ze-Clinical Neuropsychology, 25(3), i-182-190.
I-Brooks, BL, Sherman, EM, ne-Strauss, E. (2009). I-NEPSY-II: Ukuhlolwa kokuthuthuka kwe-neuropsychological. I-Neuropsychology yengane, 16(1), i-80-101.
I-NEPSY-II, test, izivivinyo eziningi, ukuhlolwa kwe-neuropsychological
Ibhethri elide lokuhlolwa nezikolo eziphansi (kubantu abavamile)2020-04-202020-04-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/04/test-ripetuti1.jpg200px200px
Ukuhlolwa kwe-neuropsychological okukude: kungenzeka?Imibhalo, Dementias, Ukuhlolwa